Olee ọrụ backlinks na-arụ na azụmahịa njem?
Ịmepụta azụmahịa njem na-abụkarị ezigbo echiche dịka ebe a ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ndị nwere ike ịnweta, mepụta mgbasa ozi nkwado ma mee ka akara gị mara nke ọma na ụlọ ọrụ gị. Otú ọ dị, iji zute ihe mgbaru ọsọ gị, ịkwesịrị ịnweta mgbasa ozi njikarịcha nchọgharị engine. Ọ nwere ike ma ọ bụ ịwelite njem njem gị na saịtị ma ọ bụ mebie mgbalị niile gị SEo. Ọ bụ ya mere ị ga-eji maracha akụkụ niile kachasị mma ma nwee ike ịmepụta nkà gị na ndụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na mpaghara a, ọ ka mma ịchọrọ ndị ọkachamara. Otú ọ dị, ọ dị mkpa na ị ga-akpacha anya nke ọma na ịhọrọ otu ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ onye ndụmọdụ dị ka enwere ọtụtụ ndị na-eme ka hà mara na ha bụ ndị ọkachamara.
Ahịa njem ahịa bụ ụlọ ọrụ asọmpi nke na-asọmpi ebe ị ga-esi nweta akwụkwọ SERP mbụ ị chọrọ iji tinye oge, ego na mgbalị. Ọ bụ ya mere m ji agba gị ume inwe ndidi na ịrụ ọrụ siri ike. Ọzọkwa, ọ dị mma ka ndị ọkachamara na-ejikọta ndị na-ewu ụlọ na-emepụta profaịlụ zuru oke maka saịtị gị nke ga-eme ka azụmahịa gị dị elu karịa ndị asọmpi gị.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụfọdụ ụzọ esi enweta azụlinks na njem na saịtị gị ma mepụta mgbasa ozi kachasị emeri.
Mgbasa ụlọ ụlọ njem gị kwesịrị ịdabere na mkpa
Enweghị njikọ nke inbound ga-eme ka saịtị njem gị dị mma na engines ọchụchọ ma ọ bụrụ na o nwere nza nke ọdịnaya dị mkpa na akwụkwọ arịlịka. E nwere otutu ebe nrụọrụ weebụ na weebụ nke na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ihe na-abaghị uru na ọ bụghị ihe bara uru. Ndị ọrụ enweghi ike ịkekọrịta ọdịnaya a na-ekpofu ahịhịa ma chọpụta bọtịnụ na-achọpụta na ọ dị oke mkpa ma dị mma. Ka Google na-aghọwanye ọkaibe, ọ nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti mkpa na enweghị njikọ na ọdịnaya saịtị ahụ. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji dịkwuo mkpa iji mepụta ebe nrụọrụ weebụ nke na - agụnye ọdịnaya dị mkpa ma dị mma nke nwere nnukwu uru nye ndị na - agụ akwụkwọ.
Ọzọkwa, ị ga-achọ ijide n'aka na ederede arịlịka gị na isiokwu gị. O kwesịrị inye nkọwa doro anya nke onye ọrụ ga-ahụ na esochi njikọ. Ịkwesịrị izere ịmepụta ihe odide arịlịka na-adịghị mkpa iji dọọ ọrụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ mgbasa ozi. Ihe a na-ejikọtaghị na ihe odide arịlịka na-eme ka ndị ọrụ daa mbà, ha na-agbanyekwa na ntanetị ọzọ dị mkpa na ibe nsonaazụ ọchụchọ.
Jiri ọrụ ụlọ njikọ njikọta iji mepụta mgbasa ozi njikọ
Backlinks bụ njikọ nke na-ezo aka na saịtị gị site na ntanetị ndị ọzọ metụtara niche. Ha dị oké mkpa maka njikarịcha weebụsaịtị ebe ọ bụghị nanị na ha na-emepụta okporo ụzọ na-agafe na saịtị gị ma na-eme ka saịtị gị dị mma karịa na Google SERP. Otú ọ dị, ọ bụghị ọrụ dị mfe iji wuo njikọ ma ọ bụrụ na ị nweghị ahụmahụ na mpaghara a. N'ụzọ dị mma, ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ọrụ ụlọ ọrụ na-ejikọta njem na weebụ. Ọrụ kachasị mma na weebụ bụ Moz, Semalt Auto SEO, na Ahrefs.
Ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ njikọta ma nwee mmeri iji ụfọdụ nsụzụ azụlinks dị ike. Anyị na-akwado nkwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50,000 na ebe nrụọrụ weebụ na niche ahịa na ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji enwe ike ịnye ndị ahịa anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ma azụlinks dofollow na-adịgide adịgide. Nsonaazụ kachasị mma nke ndị ahịa Semalt na-egosi na ọ bụ ezi echiche ịnwe ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke mgbalị SEO gị na ndị ọkachamara SEO nwere ahụmahụ na-. Njikọ Google na ụlọ ọrụ dijitalụ ọkachamara, ga-abụrịrị karịa, nye ọrụ ụlọ ọrụ backlink siri ike nke ga-eme ka ọganihu nke ụlọ ọrụ njikọ njikọ gị na njem gị Source .